January 2022 - News 88 Post
January 11, 2022 N88LeaveaComment on भारतीय दादागिरी विरुद्ध चुइँक्क बोल्न सकेनन् गगन र विश्वप्रकाश
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारलाई हरेक दिन जसो प्रश्न गर्ने कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अहिले भूमिगत जस्तै भएका छन् । भारतले नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकमा अतिक्रमण तीव्र पार्दै सडक निर्माण गर्दै आए पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अहिले केही नबोली भूमिगत जस्तै बसेको हुन् । […]
पर्यटनमन्त्री आले चढेको गाडी दुर्घटना
January 11, 2022 N88LeaveaComment on पर्यटनमन्त्री आले चढेको गाडी दुर्घटना
धनगढी । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आले सवार गाडी दुर्घटनामा परेकाे छ । मंगलबार धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जादै गर्दा आले सवार सुदूरपश्चिमकाे भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयकाे सुप प्र ०१००१ झ ३३३ गाडी विपरीत दिशाबाट आइरहेको बा ४ च १३७७ काे गाडीसँग ठाेक्किदा दुर्घटना भएकाे प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी […]
काठमाडाैं उपत्यकामा लागू भयाे १८ बुँदे नयाँ व्यवस्था, उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाही (आदेशपत्रसहित)
January 11, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं उपत्यकामा लागू भयाे १८ बुँदे नयाँ व्यवस्था, उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारवाही (आदेशपत्रसहित)
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाहरूले नयाँ आदेश जारी गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अलग अलगरुपमा नयाँ आदेश जारी गरेका हुन् । तीन वटै जिल्लाका आदेशमा घरबाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउन निर्देशन दिइएको छ । मङ्गलवार राति १२ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलका लागि जिल्ला […]
सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दै, यी राशि हुनेहरूकाे चम्किदैछ भाग्य, जान्नुहोस् आफ्नो राशिको अवस्था
January 11, 2022 N88LeaveaComment on सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दै, यी राशि हुनेहरूकाे चम्किदैछ भाग्य, जान्नुहोस् आफ्नो राशिको अवस्था
सूर्यकाे राशि परिवर्तन हुँदैछ । माघ १ गतेबाट धनु राशिबाट प्रस्थान गरी मकर राशिमा गोचर हुनेछ । सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गरेपछि मकर संक्रान्ति मनाइन्छ। यस दिनबाट सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायणमा परिक्रमा सुरु हुन्छ। सूर्यले शुक्रबार, अर्थात माघ १ गते अर्थात जनवरी १४ दिउँसो २.३० बजे धनु राशि छोडेर मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ यो १३ […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २८ गते बुधबारकाे राशिफल
January 11, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २८ गते बुधबारकाे राशिफल
वि.सं. २०७८ पुस २८ गते बुधबारकाे राशिफल मेष राशि साथीभाइलाई सहयोग गर्न सकिनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। शेयर बजारबाट लाभ मिल्नेछ । कुनै हतार छैन। योजना सफल हुनेछ। काममा प्रभाव बढ्नेछ। व्यापार व्यावसायमा लाभ हुनेछ । परिवारमा सुख शान्ति छाउनेछ। पुरानो रोग देखा पर्न सक्छ। कार्यस्थलमा परिवर्तन सम्भव छ। विरोधीहरु सक्रिय रहनेछन् । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ। वृष […]
भीर फोरेर बुद्धमूर्ति
January 11, 2022 N88LeaveaComment on भीर फोरेर बुद्धमूर्ति
११२ फिटको पूर्ण कदको मूर्तिको ३२ फिटे शिर बनाउने काम अन्तिम चरणमा, ७ मूर्तिकारको टोलीले चार महिनादेखि भीरलाई मूर्तिको आकार दिँदै। ओखलढुंगा । वरिपरि चट्टानै चट्टानको डरलाग्दो भीर । सुनकोसी–५ मूलखर्कको यही जुरेडाँडामा छ स्थानीयको चिहानडाँडा । नागी सानोभीर पहरेपाखा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने यो विशाल पहराको बीचमा वर्ष दिनदेखि बुद्धको मूर्ति कुँद्ने काम भइरहेको […]
कांग्रेसले के गर्‍यो महाधिवेशनमा मत खसालिएका हरिया ट्यांकी?
January 11, 2022 N88LeaveaComment on कांग्रेसले के गर्‍यो महाधिवेशनमा मत खसालिएका हरिया ट्यांकी?
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनको मत गणना गर्न १० दिन लगायो। मत गणना गर्न निकै झन्झटिलो पनि भएको थियो। २९ मतपत्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले मत खसालेका थिए। मत खसाल्ने बाकस भने पानी राख्ने ट्यांकी थियो। नेकपा एमाले र राप्रपाले महाधिवेशन (अध्यक्षबाहेक) मा विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा मतदान गरे पनि कांग्रेसले मतपत्र ड्रममा खसालेको भन्दै त्यसबेला […]
नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, बाबुराम भट्टराइले फ्याँके नयाँ पासा !
January 11, 2022 N88LeaveaComment on नेपाली राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट, बाबुराम भट्टराइले फ्याँके नयाँ पासा !
काठमाडाैं । महन्थ ठाकुर पक्ष छुट्टिएर गएको ६ महीना नपुग्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षबीचको संघर्ष छताछुल्ल भएको छ। भट्टराईले केन्द्रीय अध्यक्ष मागेपछि विवाद शुरू भएको हो। जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराईबीच देखिएको विवादको बाछिटा प्रदेश २ मा पुगेका छन्। दुई नेताबीचको कलहले गर्दा महोत्तरीको बर्दिवासमा […]
January 11, 2022 N88LeaveaComment on रानी महल बतासलाई दिन पर्यटन बोर्डका सीईओको लबिइङ
काठमाडौं । नेपालको ऐतिहासिक–पुरातात्विक सम्पदा र पर्यटकीय क्षेत्रमा बतास अर्गनाइजेसनले चलाउँदै आएको रजगज अब पर्दाभित्रको विषय रहेन । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरको जग्गा ‘मिलेमतो’मा भाडा लिएको सार्वजनिक भएपछि बतासको एकपछि अर्को ‘सेटिङ’ सार्वजनिक भएका छन् । राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरु रिझाएको बतास समूहले सरकारी निकायहरुमा पनि आफ्ना निकटवर्तीहरुलाई पुर्‍याएको पाइएको छ । त्यसमध्ये एक हुन् नेपाल […]
January 11, 2022 N88LeaveaComment on अमेरिकाका ५७ वर्षीय पुरुषमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण
काठमाडौं । अमेरिकाका एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ । सुँगुरको मुटु मानिसमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको यो विश्वमै पहिलो हो । बीबीसीका अनुसार बाल्टिमोरका ५७ वर्षीय डेभिड बेनेटमा सुँगुरको मुटु सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको छ । युनिभर्सिटी अफ मेरील्याण्ड मेडिकल सेन्टरका अनुसार मुटु प्रत्यारोपण गर्न सात घण्टा समय लागेको थियो । प्रत्यारोपणपछि बेनेट अहिले स्वस्थ […]